आफु पराजयी भएर पनि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई बधाई दिने नेताहरु यी हुन, कसरी बधाई दिए? – Bisal Chautari
आफु पराजयी भएर पनि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई बधाई दिने नेताहरु यी हुन, कसरी बधाई दिए?
- २४ मंसिर २०७४, आईतवार १२:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ ,२०७४ मंसिर २४ आइतवार । मंसिर १० र २१ दुई चरण्मा भएको निर्वाचनको मत परिमाण धमाधम आईरहेको छ । केहि पराजित उम्मेद्वारहरूले आफ्ना प्रतिष्पर्धी शुभकामना तथा बधाई दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिष्पर्धी बाबुराम भट्टराईलाई फोन गरेर बधाई दिए। निर्वाचन अघि भट्टराईले श्रेष्ठलाई ‘वडा अध्यक्ष‘ को उम्मेद्वार बन्न समेत लायक नभएको आरोप लगाएका थिए। अनि नारायणकाजीले पनि बाबुरामलाई ढुलमुले भएको आरोप लगाएका थिए। तर श्रेष्ठले निर्वाचन परिणामपछि राजनीतिक संस्कार देखाउँदै भट्टराईलाई बधाई दिए।
काठमाडौं ४ का विजयी कांग्रेसका गगन थापालाई पराजित उम्मेद्वार एमालेका राजन भट्टराईले भेटेरै बधाई दिए। निर्वाचन अघि गगन थापा माथि प्रचारका क्रममा बम आक्रमण हुँदा भेट्न पुगेका भट्टराईलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका थिए।
तर भट्टराईले निर्वाचन हारेपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत प्रतिष्पर्धी गगन थापालाई बधाई दिए। तस्बिर स्रोतस्टपेन्द्र कार्कीको फेसबुकबाट
ओखलढुङ्गामा एमालेका यज्ञराज सुनुवार र नेपाली कांग्रेसका रामहरी खतिवडा निर्वाचनमा आमने सामने भएका थिए। पराजित भएका रामहरीले यज्ञराजलाई अंगालो मारे। अनि बधाई दिए। प्रतिष्पर्धामा उत्रँदा रामहरीलाई यज्ञराजले भूकम्प पीडितको त्रिपाल लुकाएको आरोप लगाए। अनि रामहरीले यज्ञराजलाई चर्पी उद्घाटन गरेको आरोप लाएको थियो ।
काठमाडौं क्षेत्र नंम्बर १ का विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रलाई कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले डलर खाएर चुनाव लड्न आएको आरोप लगाए। तर, निर्वाचन जितेपछि प्रकाशमानलाई फोन गरेर मिश्रले बधाई दिए। जवाफमा प्रकाशमानले मिश्रलाई ‘राजनीतिमा कायम रहिरहन‘ सुझाए।